Imibuzo evame ukubuzwa - HANGZHOU LINAN HUASHENG DAILY NECESSITIES CO., LTD
Siyimboni, hhayi inkampani yokusabalalisa noma yokuhweba, ngakho-ke intengo kufanele ishibhe kakhulu futhi ibe nokuncintisana.
Singomunye wabanikazi besitoko sezinto zokusetshenziswa, ngakho-ke singakwazi ukulawula ikhwalithi ekuqaleni futhi intengo iyancintisana.
Yebo, sinesidingo se-MOQ uma amakhasimende adinga into eyenziwe ngokwezifiso noma iphakethe.
Noma ungakhetha ukuthenga isikhwama sephakethe se-MOQ noma amabhokisi, bese senza ukuthunyelwa okuningana. singagcina izikhwama noma amabhokisi enziwe angenalutho endaweni yethu yokugcina izinto ukuze uthole i-oda lakho elilandelayo.
Yebo, singanikeza ngemibhalo eminingi kubandakanya Izitifiketi Zomsuka; Umshuwalense; I-MSDS, neminye imibhalo yokuthekelisa lapho kudingeka khona.
Ukuze amasampula, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ngokukhiqizwa ngobuningi, isikhathi sokuhola yizinsuku ezingama-20-25 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
I-50% idiphozi kusengaphambili, ibhalansi engu-50% ikhophi ye-B / L.